Baarlamaanka Somaliland oo ansixiyay heshiiska dekedda Berbera - BBC News Somali
Baarlamaanka Somaliland oo ansixiyay heshiiska dekedda Berbera
Golaha wakiilada Jamhuuriyada iskeed ug dhawaaqday madaxbanaanida ee Somaliland ayaa maanta ayiday maalgashiga shirkadda DP World ee dekedda magaalada Berbera.
Qaraarku waxa uu gef ku tilmaamaya go'aankii shalay ay soo saareen xildhibaanada golaha shacabka Soomaliya.
Gudoomiyaha baarlamanka Somaliland, Baashe Maxamed Faarax, ayaa BBC-da u sheegay in ''hadalka ka soo yeeray dowladda federaalka ee Soomaaliya wuxuu gaf ku yahay jiritaanka iyo qaranimada Somaliland''.
Wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Cabdillahi Guri-Barwaqo ayaa horay ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay danaheeda raacato oo ay faraha kala baxdo Somaliland.
"Dowladda Soomaaliya waxaan u sheegeynaa in Somaliland ay leedahay dastuur, kaas oo shacabka u codeeyeen boqolkiiba 97%, rubuc qarnina lagu soo dhaqmayay" ayuu yiri wasiirka warfaaafinta Somaliland.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay meelmariyay xeer ay ku sheegeen inuu dalka ka mamnuucayo shirkadda DP World oo ay sheegeen inay meel uga dhacday madaxbanaannida Soomaliya markii ay heshiiskaasi la saxiixatay Somaliland iyo Itoobiya.